Maya Magazine: ဖယောင်းလိုလူ သံမဏိလိုလူ(လူထုဦးလှ အနှစ် ၁၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး)ရေးသူ- လူထုစိန်ဝင်း
ဖယောင်းလိုလူ သံမဏိလိုလူ(လူထုဦးလှ အနှစ် ၁၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး)
[အီးမေလ်မှ ရတဲ့ Eleven ဂျာနယ် မှ ဆောင်းပါးကို မာယာက အမြတ်တနိုး ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။]
လူ့လောကမှာ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေရှိတယ်။ တချို့ကလူနဲ့မူနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျပြီး တချို့ က လူတခြား၊ မူတခြား လုံးဝကွဲပြား ခြားနားတယ်။ သိသာထင်ရှားသူနှစ်ဦးကို နှိုင်းယှဉ်ပြရမယ်ဆိုရင် သခင် စိုးနဲ့ သခင်ဗဟိန်းကိုပြရလိမ့်မယ်။ သခင်စိုးကလူပုံကြမ်းတမ်းသလို စိတ်ဓာတ်ပိုင်း၊ မူပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း အင်မတန်ကြမ်းတမ်းသူဖြစ်တယ်။ သခင်ဗဟိန်းကျတော့ လူကလူချောလူရည်သန့် ၊ အနုအလှလေးတွေကို ချစ်တတ်သလို အနေအထိုင်၊ အပြောအဆိုလည်း သိမ်မွေ့ယဉ်ကျေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယုံကြည်ချက်အပိုင်း၊ မူအပိုင်းမှာတော့ အင်မတန်ခိုင်မာပြတ်သားတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ခိုင်မာပြတ်သားသလဲဆိုရင် ကွယ်လွန်ခါနီး ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ဖဆပလထဲက ထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူမမာလာမေးချင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတောင် သူဆီခေါ်မလာနဲ့၊ မတွေ့ချင်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ် သားသားပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော်တော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရှာတယ်။ ဦးနုကျတော့ နာမည် နဲ့ လိုက်အောင်လူနုပြီး လူတစ်ဖက်သားကို ဘယ်တော့မှ နင်ဘဲငဆပြောလေ့မရှိဘူး။ စိတ်အင်မတန်နူးညံ့တယ်။ လူတိုင်းကျေနပ်အောင် အမြဲကြိုးစားတယ်။အဲဒီတော့လူတိုင်းကို ကျေနပ်အောင်လိုက်လုပ်ရင် နောက်ဆုံးကျ ဘယ်သူမှကျေနပ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သိုးဆောင်းစကား ဆိုရိုးရှိတဲ့အတိုင်း ဘယ်သူ့ကျေနပ်မှုကိုမှ မရခဲ့ရှာဘူး။
ဦးလေးလှက သခင်ဗဟိန်းလို လူစားမျိုး။ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် လူ ကလူချောလူလှ ဖြစ်သလို၊ စိတ်လည်း အင်မတန်လှတယ်။ အင်မတန်မှလည်း နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။ ဆရာဒဂုန်တာရာပြောတဲ့ စကားအတိုင်း သူ့ဘက်ကတော့ 'မုန်းသူမရှိ၊ ချစ်သူသာရှိ၊ ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိ' ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကမုန်းသူမရှိ၊ ရန်သူမရှိသဘောထားပေမယ့် သူ့ကိုရန်သူလိုသဘောထားသူတွေ ရှိလေတော့ နာမည်ကျော် ပုဒ်မ ၅ နဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လေးနှစ်နီးပါးသွားနေခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လောကဓံတရားရဲ့ ပြက် ရယ်ပြုမှုလို့ ပြောရမလား၊ အကြည်စားသန်မှုလို့ဆိုရမလား မသိတဲ့အချက်ကတော့ ဦးလေးလှကို ထောင်ထဲ ပို့ခဲ့တဲ့ ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးကို စတင်တည်ထောင်သူတွေထဲမှာ သူဟာတစ်ယောက် အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ရုံတင်မက၊ ဂျပန်အပြေး အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဝင်ဝင်ချင်း၊ ဖဆပလအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဆိုင်းဘုတ် ကို မန္တလေးမှာပါမောက္ခဦးကျော်ရင်နဲ့ အတူအရင်ဆုံးတင်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာတောင် အဲဒီအချိန်က ဖဆပလအဖွဲ့ ပြန်မဖွဲ့နိုင်သေးပါဘူး။
သူ့ကိုထောင်ထဲထည့်ခဲ့ပေမယ့် ဦးလေးလှက ဘယ်သူ့အပေါ်မှ အာဃာတမထားခဲ့ပါဘူး။မေတ္တာလည်း မပျက်ခဲ့ပါဘူး။ ကွယ်လွန်သူ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုက 'နှစ် ၉၀ ပြည့် လူထုဦးလှ' စာအုပ်မှာ အမှတ်တရ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးသားပေးပို့ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ . . .''ကိုလှရေ။ ကိုလှဒုက္ခရောက်အောင် ကျွန်တော် လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဟာ မသေးပါဘူး။ အင်မတန်ကြီးမားပါတယ်။ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ် အစရှိတဲ့ စကား တွေကိုပြောရုံမျနဲ့ ကျေအေးနိုင်လောက်တဲ့ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုလှဟာ ကျွန်တော့်ထက်ကြီးရင် ကျွန်တော်က ကိုလှကိုထိုင်ပြီး ရှိခိုးတောင်းပန်ရမယ့် အပြစ်မျိုးဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော် အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါရစေ။ အပြစ်တွေရှိသမျ ကျွန်တော့်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျွန်တော့်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးပါ . . .''လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစကားတွေကို မန္တလေးဘူတာကြီးမှာ ရထားထွက်အံ့ဆဲဆဲ ဦးလှကို ရုတ် တရက် တွေ့လိုက်ရတုန်းဦးနုကသွား ပြောခဲ့တာပါတဲ့။ ဒီစကားတွေကို ပြောချင်တာကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် မပြောဖြစ်ခဲ့လို့ ခုလိုကြုံကြိုက်တုန်း ကတိုက်ကရိုက် သွားပြောခဲ့ရတာလို့ လည်း ဦးနုက ရေးပြထားပါတယ်။
ဦးလေးလှက ဘယ်သူ့အပေါ် မှာမှ မုန်းစိတ်၊ အာဃာတစိတ်လုံး ၀မရှိခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ် ဆိုတာ နိဗ္မာန်ရောက်ကြောင်း တရား အားထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ သဘော ထားကွဲကြ၊ စကားများကြ၊ အပြန်အလှန် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြ ဆိုတာတွေ ဖြစ်မြဲထုံးစံပဲလို့ ဦးလေးလှက ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက် နားလည်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဦးလေး သဘောထားကြီးတာ နိုင်ငံရေးလုပ် ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအပေါ်မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ထောင်ကျတဲ့အကြိမ်တွေ မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် များနေပြီ ဖြစ်တဲ့ သူမျိုးအပေါ်မှာလည်း သဘောထားကြီးရုံမက မေတ္တာစေတနာထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နိုင်ငံ ရေးသမားအိုကြီးတွေ၊ စာရေးဆရာအို ကြီးတွေ အပေါ်စေတနာထားပုံတွေက လည်းပြောလို့ ကုန်နိုင်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ ဦးလေးရှိတဲ့ မန္တလေးဆိုတာမပြောနဲ့တော့ ရန်ကုန်တိုက်ခွဲမှာ လာကြတာတွေကိုက မနည်းပါဘူး။ လူငယ်ပီပီတစ် ခါတလေ ကိုယ်ကစေတနာတွန့်တိုမိပေမယ့် ဦးလေးကတော့ ဘယ်တော့မှ မတွန့်တိုပါဘူး။''အသင့်အတင့်တော့ ကြည့်ပေးလိုက်ပါကွယ်'' ဆိုတဲ့လက်သုံးစကားကိုသာ ပြောမြဲဖြစ်ပါတယ်။
ဦးလေးလှဟာ အပြောအဆို၊ အနေအထိုင်၊ အစားအသောက် နေရာတကာယဉ်ကျေးသူ၊ နှလုံးကြီးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖဆပလခေတ်မှာ လည်း ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု မန္တလေးရောက်တိုင်း ဦးလေးကိုခေါ်တွေ့ပြီး စကားစမြည်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ၁၉၆၂ခုနှစ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပိုင်းမှာလည်း အဲဒီအချိန်က တော်လှန်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း မန္တလေးရောက်တာနဲ့ ဦးလေးလှကိုခေါ်တွေ့ပြီး စကားစမြည်ပြော တာပါပဲ။ တစ်ခါတလေ ဦးလေးလှ ရန်ကုန်ရောက်လာရင်လည်း ရောက်ပြီးမကြာခင် အိမ်တော်ကအခေါ် ရောက်လာမြဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ် ရေးမှာတော့ ဦးလေးလှဟာအင်မတန်မှကို ပျော့ပျောင်းနူးညံ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူထုသတင်းစာရဲ့ မူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ နည်းနည်း မှအလျော့မပေးပါဘူး။ စာဖတ်ပရိသတ်ရဲ့ မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စာဖတ်ပရိသတ်အပေါင်းက လူထုဦးလှ ကိုချစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးသား စစ်စစ်မဟုတ်ပေမယ့် မန္တလေး တစ်မြို့လုံး ကလေး၊လူကြီးမရွေး ထေကြီး၊ ၀ါကြီးဆရာတော်ကြီးများ ကအစချစ်ကြပြီး အားကိုးအားထား ပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ ဦးလေးလှတစ်ယောက်သာ ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြို့နဲ့ပတ် သက်သမျ ဝေယျာဝစ္စတိုင်းမှာ ဦးလေးလှ မပါတဲ့ကိစ္စမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗထူးကွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်လူ ကြီးလုပ်ခဲ့သလို တက္ကသိုလ်ဆီးနိတ် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အရပ်ထဲကကြက်တောင်ရိုက်အသင်း လူကြီးဖြစ်သလို၊ မန္တလေးတောင်ခြေ ဂေါက်ကွင်းလူကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူကြီးတွေအတွက် စာအုပ် တွေမျိုးစုံရေးခဲ့သလို ကလေးတွေအတွက် ပုံပြင်စာအုပ်တွေချည်း ၄၆ အုပ်တောင် ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဦးလေးလှဟာ ဦးနုတို့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့သလို ကလေးတွေရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောရင်းနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Maung Aye Win at 10:44 PM